Promotion Archives - Page2of2- Sule Square
T8Hair Design Grand Opening
Sule Square Level2မှာ T8 ဆိုင်သစ်ကို အောင်မြင်စွာကို ဖွင့်လှစ်ပြီးစီးသွားပြီနော် 😍
Grand Opening Special Promotion အနေနဲ့….. ဖွင့်ပွဲလက်ဆောင်တွေအပြင် 40% special discount အစီအစဉ်နဲ့ ၁၀,၀၀၀ကျပ် သုံးရင် Free T8 ရဲ့ 30% Off Member Card ကို ဆိုင်ဖွင့်ပြီး ၁ လ အတွင်းပေးဦးမှာဆိုတော့…စတိုင်ကျချင်တဲ့ကိုကိုမမတွေအားလုံး မြန်မြန်လေးသာလာခဲ့ကြတော့နော်။ 😉
Congractualations!! T8 Hair Design shop is opening today at Sule Square Mall & Office. #sulesquaremalloffice #suleshangrila
1. 40% off from 23 Jan to 23 Feb 2018.
2. Special gift for first customers 500persons.
3. 30% off for member cards maximum 1000persons
DO NOT MISS IT !!………..
ကိုယ်တိုင် စိတ်တိုင်းကျရွေးချယ်ထားတဲ့ လက်ဝတ်ရတနာဒီဇိုင်းအတိုင်း
မိုးကုတ်တွင်းထွက်ဖြစ်ပြီး သဘာဝအတိုင်းလှနေတဲ့ ပတ္တမြားပွင့်လေးတွေပါ။
ပတ္တမြားပွင့်လေးတွေ ၅၈ ပွင့် ရှိပြီး စုစုပေါင်း ၃၅.၁၂ ကလပ် ရှိပါတယ်။
ကျောက်ပွင့်လေးတွေကို ကိုယ်တိုင်လေ့လာပြီး ဝယ်ယူချင်တယ်ဆိုရင်
Sule Square by Shangri-La မှာ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Thida Gems Showroom ကို ကြွလှမ်းခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်..
For those who wish to wear the best quality jewelry, our the ruby necklace set from Myanmar renowned Ruby Place, Mogok will be your choice. It’s created with 58 ruby stones which weighs 35.12 carats. Come and shop your favourite ruby gems at Thida Gems Showroom at Sule Square by Shangri-La.
To enjoy the Best Chicken in your holidays
သင့်အားလပ်ရက်လေးမှာ ဗိုက်ဖြည့်ဖို့ အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ ကြက်သားအရသာလေးတွေကို လိုက်ရှာနေမိနေသလား?
Sule Square ရဲ့ Chicken Rice Shop ကတာ့ စားသုံးသူတွေကို ပိုမိုအဆင်ပြေစေဖို့… Special Sets လေးတွေ ယူဆောင်လာပါပြီ။
ကဲ အခုပဲ… ကောင်းမှကောင်း ကြက်သားအရသာလေးတွေကို မြည်းစမ်းခံစားဖို့ Sule Square မှာရှိတဲ့ Chicken Rice Shop လေးကို အရောက်လှမ်းလာခဲ့လိုက်တော့နော်။
To enjoy the Best Chicken in your holidays, the Chicken Rice Shop brings special sets for you
Let’s beginatour on the best chicken flavour in the Chicken Rice Shop at Sule Square Mall.
Dry skin is especially common in the winter
“အေးမြတဲ့ဆောင်းရာသီ မှာ အေးမြမှုအငွေ့အသက်နှင့်အတူ အသားအရေ ခြောက်သွေ့ခြင်းတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခြောက်သွေ့ခြင်းတွေကို ကာကွယ်ပေးပြီး ရေဓါတ်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးဖို့ RVB Product နဲ့သာ Facial Treatment လုပ်ပေးတဲ့ Beauty Concepts ကို သွားကြရအောင်…
ဆိုင်လိပ်စာကတော့.. Unit 205, Level 2, Sule Square Mall & Office
ဖုန်း – 09 97590 9619 ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်..”
“Dry skin is especially common in the winter. To rehydrate your dry skin, let’s go to Beauty Concepts for facial treatment which only uses RVB product.
The address is Unit 205, Level 2, Sule Square Mall & Office; Phone No – 09 97590 9619.”